SKF gbanyere mkpọrọgwụ na China na Shanghai Kaiquan na-aga ụwa niile
Na Mee 9, 2018, Maazị Tang yurong, Svenska kullager-fabriken otu onye isi osote onye isi ala na Onye isi oche nke SKF Asia, yana Maazị Wang wei, Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahịa ụlọ ọrụ SKF China gara Shanghai kaiquan n'aha ndị otu SKF.
Maazị Wang jian, osote onye isi otu ndị Kaiquan nabatara ndị ọbịa ahụ nke ọma wee gwa ha usoro mmepe nke otu ndị na-eso ụzọ. Maazị Wang sooro ndị ọbịa gaa leta ụlọ mgbapụta kaiquan na igwe ojii nwere ọgụgụ isi ma mee nkọwa zuru ezu. Akụkụ abụọ ahụ gosipụtara ebumnuche ha iji mekwuo mmekọrịta ha.
Maazị Lin kaiwen, onye isi oche nke ndị otu Kaiquan, kpebiri imekọ ihe ọnụ na nsogbu ndị a dabere na ikike ikikere nke ikike dị ugbu a mgbe anyị na ndị nnọchi anya SKF tụlechara:
1. Mie emeri imekọ ihe ọnụ na n'ụzọ zuru ezu mụbaa imekọ ihe ọnụ na otutu ngwaahịa, nyiwe na ụlọ ọrụ;
2. Mee ka nkwukọrịta teknụzụ sie ike, gụnyere mmepe ngwaahịa ọhụụ, nwelite ngwaahịa na njiri mara njiri mara;
3. Na-arụkọ ọrụ ọnụ na nyochaa arụmọrụ nke akụrụngwa na-agbagharị. N'iji ihe omuma nke ndi ozo di iche iche di iche iche, mepee mkpebi siri ike iji nwalee oru nke ihe ndi mmadu na-agbaghari na China. Jiri nnukwu data na igwe ojii na-arụ ọrụ pụtara inyere ndị ahịa aka inweta ọhụhụ na amụma banyere arụmọrụ akụrụngwa.
SKF bụ onye na - eduzi ụwa nke na - ebugharị ebugharị, yana arụmọrụ na mba 130 na ihe karịrị nde 500 bipụtara kwa afọ. Shanghai kaiquan, dị ka ndị na-eduga enterprise na anụ ụlọ mgbapụta ụlọ ọrụ, ga-eme nkwonkwo mgbalị na SKF iji nweta ukwuu rụzuru na ngwaahịa nnyocha na mmepe, njikarịcha na upgrading. Ka anyị chere ma hụ!